Hoos ku xusan yihiin saddex qalabka muusikada sare ugu lagu soo diyaariyay by Apple Inc. si loo hubiyo in music ku saabsan go marna waa arin u user a. Waxaa jira tobanaan kun oo faa'iidooyinka adigoo isticmaalaya qalabka iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in qalabka heer sare ah oo loogu baahan yahay. Hoos ku xusan yihiin qaabab habboon in waxaa taageera qalabka muusikada, kuwaas oo la xidhiidha gabayo la ciyaari kartaa adigoo isticmaala mar kasta ay doonayaan in la hubiyo in arrinta marnaba baxdo marka a song la soo bixi in qaab kasta.
1. iDevices iyo qaabab music taageeray
2. Sidee inay muusikada lacag la'aan ah kiniiniyada iPad,, iPod, iPod shaandheyn la TunesGo
3. Sidee si ay u gudbiyaan music in iDevice
4. Sidee si ay u gudbiyaan music in Lugood
iDevices iyo qaabab music taageeray
iPad taageeraya qaabab
Kuwa soo socda waa qaabab music in waxaa taageera iPad iyo waa in la ogaadaa in macluumaadka ayaa laga soo URL http://www.theipadguide.com/faq/what-audio-formats-will-ipad-playsupport
AAC (16 ilaa 320 Kbps)
AAC Protected (MP4 ka Lugood Store)
MP3 (16 ilaa 320 Kbps)
Maqli karo (qaabab 2, 3, iyo 4)
iPod taageeraya qaabab
Qaababkan soo socda waxaa taageera iPod iyo faahfaahinta ayaa loo soo bixiyay URL http://www.everymac.com/systems/apple/ipod/specs/ipod_2ndgen.html
MP3 (ilaa 320 Kbps)
MP3 Rate Doorsoome Inyar (VBR)
Maqli karo, (waayo Mac kaliya)
iPod isku shaandheyn ku taageeraya qaabab
Kuwa soo socda waa qaabab ay caawinayso shaandheeyn lagu iPod iyo fiirsato la sameeyo ka https://www.apple.com/ipod-shuffle/specs.html
AAC (8 ilaa 320 Kbps)
AAC Protected (ka Lugood Store)
MP3 (8 ilaa 320 Kbps)
Maqli karo (qaabab 2, 3, 4, la maqli karo wanaajiyey Audio, AAX, iyo AAX +)
Sidee inay muusikada lacag la'aan ah kiniiniyada iPad,, iPod, iPod shaandheyn la TunesGo
Wondershare Loo yaqaan horumarinta barnaamijyada ee aan ahayn gobolka kaliya ee farshaxanka, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in kala iibsiga music ka dhufto ee kala duwan si ay Lugood iyo iPod, shaandheeyn lagu iPod iyo iPad ee ma aha arin oo dhan. Interface ayaa software-dhexgal hubiyaa in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala si ay u isticmaali karaan barnaamijka fudayd iyo qanacsanaanta. Users ayaa sidoo kale hubin karaa in in kala iibsiga music ka madal iDevice ee ma aha arin oo dhan. The Lugood arrintan la xiriira soo bandhigaysaa caqabado iyo user ay u baahan tahay in ay ka gudbaan arrimaha liisan oo aad u badan in industry oo ay si fudud aan loo saaro si TunesGo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala ku saabsan arrintan la xiriira sameeyo oo ay hesho heshiiska ugu fiican bixinta onetime taas oo dayactirka ka waxaa la siiyaa ilaa barnaamijka waxaa maamula gal nidaamka. TunesGo ayaa loo arki karaa nidaamka music maamulka u saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hubiso in dayactirka marna waa arrin sidii Wondershare qaadataa ilaa habkan in ka buuxa ka kaaftoomi. Tutorial Tani waxay hubisaa in user helo talaabo talaabo si faahfaahsan si loo hubiyo in talaabooyinka hawl la fahamsan yahay ka dhigi doonaa. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/tunesgo/ waa in la browsed si loo hubiyo in website-ka ugu weyn ee Wondershare la furay:
2. user ayaa haatan u baahan yahay inuu guji Isku day button lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in pop u muuqdo:
3. button file badbaadiyo waa in la riixi si software ah la geliyo. The Dardar sababtay sidoo kale in la raaco arrintan la xiriira. Marka la rakibo ayaa dhameystiraya user markaas u baahan yahay in la hubiyo in software waxaa taabtay furay iyo interface ugu weyn ee barnaamijka muuqataa:
4. Si aad u download music ee foomka of Baarlamaanka 3 user ay u baahan tahay in ay soo booqdaan homepage> YouTube in Lugood
5. iDevice ayaa markaas waa in lagugu xiro computer si loo hubiyo in barnaamijka iyo info ah oo uu soo keydsan gudaha ogaadaa,
6. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in music Transfer ee> Import ka Lugood la doorto:
Sidee si ay u gudbiyaan music in iDevice
Habka wareejinta music ka nidaamka si iDevice waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka uu soo hoos ku xusan waxaa la socda si aan noqotaa oo keliya, laakiin sidoo kale user helo natiijada waafaqsan looga baahan yahay:
1. user wuxuu u baahan yahay in booqo bogga internetka ee Wondershare si ay u soo bixi sida software www.wondershare.com/tunesgo oo guji tijaabiyo oo lacag la'aan ah si ay u hubiyaan in habka la initialized:
2. Marka barnaamijka ayaa lagu rakibay user u baahan yahay si loo hubiyo in waxa la bilaabay si shaashadda weyn u muuqataa,
3. Aaladda markaas waa in lagugu xiro kombiyuutarka:
4. dejinta TunesGo waa in la riixi si loo hubiyo in dardar la raacay iyo music waxaa loo wareejiyay PC ama meel kale oo gool nidaamka:
5. Sida laba qalab ku xiran yihiin in computer si function toggling waa in loo isticmaalo si ay u gudbiyaan ka kooban qalab android:
Sidee si ay u gudbiyaan music in Lugood
Soo socda waa habka ay leedahay in la raaco si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira iyo natiijada waxaa heshay sida loo baahan yahay:
1. iDevice waa in lagugu xiro kombiyuutarka:
2. Barnaamijka waxaa lagu ogaan doonaa iDevice si toos ah iyo doonaa muuqata sida aan ka arki tiradaasi hoos ku qoran:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in dhoofinta in Lugood waxaa loo doortay in ay sii wadi:
4. Marka habka uu dhamaysto user markaas u baahan yahay in la hubiyo in qalab bartilmaameed ku xiran PC iyo music la wareejiyo si loo dhamaystiro hawsha. Waxaa sidoo kale in la xuso in habka isku khusaysaa qalabka android iyo sidoo. Qalabka waxa kale oo laga yaabaa in lagugu xiro si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo sida ugu wanaagsan.
Talada khabiirka waa mid aad u muhiim ah haddii user waa ay awoodi weyday in ay raacaan nidaamka. The forums ee Wondershare sidoo kale halkan si aad u hubiso in arrinta user ee loo xalin lahaa arrintan la xiriira. Tirada badan ee isticmaala sidoo kale wuxuu hubiyaa in arrinta weli ma kulanka oo dhan. Si loo hubiyo in xogta la ahaa ma waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in talo khabiir waxaa gaadhin.
> Resource > iPad > Music Bilaashka ah ee iPad / iPod / iPod shaandheyn